Sunday November 18, 2018 - 10:05:30 in Wararka by
Munaasabado ka dhacay degmooyin dhaca Bariga Galguduud ayaa kumanaan neef ari ah loogu qeybiyay dadka ay ku kacdo Zakada waxaana kamid ah magaalooyinka Ceelbuur, Ceeldheer,Galcad,Xiindheere Galhareeri iyo Ceelgaras.
Xoolaha la qeybiyay oo isugu jiray Ari iyo Ido ayaa gaarayay 2067 neef waxaana ka faa'iideystay illaa 300 oo qoys kuwaas oo ah dadka ay ku kacdo zakada oo ay kamid yihiin Masaakiin iyo Fuqaro.
Sanadkaan isbedel weyn ayaa ku yimid qaabka loo qeybinayay xoolaha Zakada, qoysaska miyiga deggan ee danyarta ah waxaa lasiinayay xoola dhan 20 neef si ay udhaqdaan ugana baxaan faqriga, 64 qoys ayaa la siiyay Min 20 Neef oo Ari iyo Ido isugu jira, inta kale waxaa lasiiyay 3 neef illaa iyo 5 Neef.
Mas'uuliyiin katirsan Wilaayada Islaamiga Galguduud oo ka hadlay munaasabadihii Xoolaha Zakada lagu qeybinayay ayaa sheegay in sanadkan dadka Zakada lasiiyay ay rajeynayaan in sanadka dambe ay noqdaan dad Hanti leh oo qudhoodu zaka bixiya.
Gobollada dhaca Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya ee shareecada Islaamka lagu maamulo ayaa laga aruuriyaan Zakada oo laga qaado dadka hantida heysta dibna loogu celiyo dadka fuqarada ah.
Hoos Ka Daawo Sawirrada Xoolaha Zakada oo laga qeybiyay Gobolka Galguduud.